Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Medicines mostly used (2) အသုံးများ ဆေးဝါးများ (E to F)
Medicines mostly used (2) အသုံးများ ဆေးဝါးများ (E to F)
201. Easylax Suspension = Milk of magnesia 11.25 ml ဝမ်းပြော့ဆေးရည်၊
202. ECEE2 (Levonorgestrel 750mcg) အရေးပေါ်ပဋိသန္ဓေတားဆေး၊ Progestin (Levonorgestrel) 1.5 mg တလုံးတကြိမ်တည်း သို့မဟုတ် 750 μg ၁၂ နာရီခြား နှစ်ခါခွဲသောက်နိုင်။ ဆိုးကျိုး = ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ရင်သားတင်းခြင်း။
203. Elocon (mometasone furoate) Lotion, 0.1% အရေပြားနာ၊ နှင်းကူနာ၊ ကြာရှည် အလာဂျီရခြင်း၊
204. Embee = Albendazole သန်ချဆေး၊
205. Emflam = Diclofenac 75-150 mg in divided doses NSAID အနာ-အကိုက်ပျောက်ဆေး၊
206. Emidoxyn, Stemetil မူး-အန်-ပျို့သက်သောဆေး၊ 12.5 mg IM/Orally QID
207. Enalapril (Maleate) = ACE inhibitor သွေးတိုးကျဆေး၊5mg OD and 5-40 mg in 1-2 doses နှလုံးအလုပ် မလုပ်နိုင်တော့ခြင်း၊ Initially 2-5 mg gradually increased to maintenance dose of 10-20 mg once or in divided doses ရေများများသောက်ပါ။
208. Encephabol ဦးနှောက်အားနည်းခြင်း၊
209. Enoxacin (200-400 mg BD Oral) အသက်ရှူလမ်း-ဆီးပြွန်-အစာခြေလမ်း- အရေပြားနာ၊
210. Enzyme Plus = (Diastase + Papain) Digestive Enzyme အစာခြေအင်ဇိုင်း၊
211. Ephedrine (Adrenaline) = 25-50 mg IM/SC/IV slow 25-50 mg Orally QID လေပြွန်ကျဉ်း၊ ရုတ်တရက် ပန်းနာကျပ်ခြင်း၊ အင်းဆက်ကိုက်၊ အလာဂျီဖြစ်၊ (ရှော့ခ်) အား ကုသနိုင်သည့်ဆေး၊
212. Eptoin, Dilantin (Phenytoin Sodium) = အတက်ပျောက်ဆေး၊ Epilepsy ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ၊ 100-mg TDS/OD; Children Initially,5mg/kg/day in2or3equally divided doses, with subsequent dosage toamaximum of 300 mg daily. A recommended daily maintenance dosage is usually4to 8 mg/kg. Children over6years old and adolescents may require the minimum adult dose (300 mg/day)
213. Ergotamine, Migranil 1-2 mg IM; 1-2 mg Orally QID (မိုင်ဂရင်း) အမူးရောဂါဆေး၊ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = အန်-ပျို့၊ ခြေလက်အေးစက်၊ ဗိုက်နာ၊ (နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် သွေးတိုး ရှိသူများမှအပ) ရှူဆေး၊ စအိုမှလည်းပေးသည်။
214. Erometrine သားအိမ်ကြုံ့ဆေး၊ = 200 micrograms (hydrogen maleate) in 1-ml ampoule;
215. Erythromycin, Azithromycin, Clarithromycin, Erythrocin, Tyhromycin, E-mycin
a. Erythromycin 250-500 mg QID (ကလာမိုင်ဒီးယား) ကြောင့် ဆီးပြွန်အဝရောင်ခြင်း၊ သားအိမ်အဝ ရောင်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ပိုးကြောင့် ဝမ်းလျှောခြင်း၊
h. Erythromycin: Adults: 250-500 mg QID and total amount not to exceed4Gm ina24-hour; Children: 15-25 mg/kg. Orally Suspension: ½ -2teaspoon QID x 10 days; 500 mg QID x 10 days (18.75 mg/kg QID Orally) နားပြည်ယိုခြင်း၊ အရေပြားနာ၊ လိင်မှတဆင့် ကူးစက် ရောဂါများ၊ အသက်ရှူလမ်း အထက်ပိုင်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ နှလုံးအတွင်းသားရောင်ခြင်း၊ အရိုးအဆစ် ရောင်ခြင်း၊ ဂနိုရီးယား၊ အစာခြေလမ်းရောင်ခြင်း၊ မျက်စိပိုးဝင်ခြင်း၊ မွေးစကလေးငယ်များ နှလုံး အလုပ်မနိုင်ခြင်း၊
i. ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ဝမ်းပျက်၊ ဗိုက်နာ၊ အနီပြင်ထွက်၊ ကိုယ်ပူ၊ အသားဝါ၊ ပျို့၊
216. Estrogen အမျိုးသမီး ဟော်မုန်း၊ ၎င်းဟော်မုန်း နည်းပါက မျက်နှာနီမြန်းခြင်း၊ ချွေးထွက်များခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်သည်။ လိင်စိတ်နည်းပြီး အရိုး အားနည်းလာကာ အရိူးကျိုးလွယ်လာသည်။ အချို့မှာ စိတ်ဓါတ် ကျတတ်သည်။ သွေးဆုံးချိန် ဖြစ်တတ်သည့် လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ တနေ့လျင် 2.5 mg ပေးရသည်။ နေ့စဉ် သောက်ချိန် မှန်သင့်သည်။ ဥပမာ နံနက် ၁ဝ နာရီဆိုက နေ့စဉ် နံနက် ၁ဝ နာရီ သောက်ပါ။ ဆေးသောက်ရန် မေ့သွားပါက ၁၂ နာရီ မကွာခြားသေးက မှတ်မိချိန်မှာ ဆေးသောက်ပါ။ သက်သာ လာသည်ကို ရက်သတ္တပါတ် အနည်းငယ်အတွင်း သိသာလာမည်။ ၃ လ လောက်ရှိမှ ပိုသိသာမည်။ သွေးဆုံးချိန်နောက် ၁ နှစ်လောက်ကြာမှ ပေးတာ ပိုကောင်းသည်။ သို့မဟုတ်ပါက ရာသီမမှန် ဖြစ်တတ်သည်။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေချိန်-နို့တိုက်ချိန် မပေးရ။ သွေးခဲပိတ်ရောဂါရှိဘူးလျင်၊ ဆိုးသည့် အသဲရောဂါ ရှိလျင် မပေးရ။
217. Ethambutol (HCl) (Ulticox-800) 15-25 mg/kg daily for 60 days တီဘီဆေး အခြားဆေးများနှင့် တွဲပေးရသည်၊ (လူကီးမီးယား) ခေါ် သွေးအားနည်းရောဂါ၊ 100 mg-400 mg; တီဘီ၊ အခြား ဆေးများနှင့် တွဲပေးပါ၊ 250-500 mg BD; 15-20 mg/kg (Max. 1 Gm)
218. Ethosuximide capsule အတက်ရောဂါ၊ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ၊ 250 mg; syrup, 250 mg/5ml
219. Etofyline and Theophyline = ပန်းနာ၊ 250-500 mg (4-5 mg/kg) IV slowly, 100-300 mg TDS/QID Orally (5 mg/kg)
220. Etoricoxib 60, 90 mg/day for chronic pain and 120 mg/day for acute pain ရက်တို နှင့် နာတာရှည်အနာ သက်သာဆေး၊
221. Etronidazole2Gm stat x7days မွေးလမ်းကြောင်းရောင်ခြင်း၊
222. Famciclovir (0.5 g) (Famvir) Herpes labialis ပြန်ဖြစ်သောနုတ်ခမ်းရေယုံ = 1500 mg asasingle dose; Genital herpes ပြန်ဖြစ်သော မွေးလမ်းရေယုံ၊ 1000 mg twice daily for 1 day followed by 250 mg twice daily; Herpes zoster (shingles) ရေယုံ၊ 500 mg every 8 hours for7days;
223. Famotidine လေနာအတွက်ဆေး၊ 20-40 mg Orally DU လေနာ၊ သာမန်ဖြစ်သော အစာမြိုပြွန် ရောင်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်ပူခြင်း၊ အစာခြေရည် အထက်တက်ခြင်း၊ စိတ်-အလုပ်ရှုပ်၍ အစာအိမ်ရောင်ခြင်း၊
224. Fasigyn = Tinidazole (ထရွိုင်ကိုမိုးနပ်) ပိုး၊ (ဂိုင်ယားဒီးယား) ပိုးအတွက်ဆေး၊ a. ခွဲစိတ်လူနာကို ပိုးကာကွယ်ရန်၊ မခွဲမီ ၁၂ နာရီကြိုပေးပါ။2Gm; Adult 1.6 Gm IV infusion; b. မွေးလမ်းကြောင်းရောင်၊ လေမကြိုက်သည့်ပိုး၊ Orally2Gm stat x2days;2Gm stat followed by 1 Gm OD or 500 mg BD x 5-6 days; c. အမီးဘား ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊ အသဲပြည်တည်ခြင်း။ Tinidazole 800 mg TDS x 3-5 days + Diiodohydroxyquin 650 mg TDS x 21 days d. (ဂိုင်ယာဒီးယား) ပိုးဝင်၍ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊2Gm Stat followed by 1 g/day for 5-7 days e. သွားဖုံးရောင်၊ 1 Gm followed by 1 Gm x 5-6 days f. ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ အရသာပျက်၊ အနီပြင်ထွက်၊ ခေါင်းမူး၊ ဆီးနီ။
225. Fericip (Iron 100 mg and Folic acid 550 mg) သံဓါတ်နှင့် ဖေါလစ်အက်စစ်၊ 1-3 OD; 150-300 mg BD ရက်အနည်းငယ်မှ ၃-၆ လအထိ ပေးသင့်၊ အစာမစားမီပေးပါ၊
226. Ferrous fumarate သွေးအားကောင်းဆေး၊ 325 mg အစာနဲ့ဝေးသောက်ပါ။ တနေ့ ၂-၃ ကြိမ်၊
227. Ferrous sulfate သွေးအားကောင်းဆေး၊ 300 to 325 mg အစာနဲ့ဝေးသောက်ပါ။ တနေ့ ၃-၄ ကြိမ်။
228. Flagyl = Metronidazole
229. Flucloxacillin ပဋိဇီဝဆေး၊ အရေပြားနာ၊ ကြွက်သားနာ၊ အသက်ရှူလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊ 250 mg QID Orally; 250-500 mg QID IV
230. Fluconazole (Diflucan) (ဖန်းဂပ်စ်) ခေါ် မှို ရောဂါ ထိုးဆေး၊ စားဆေး၊
a. Fluconazole 150 mg တနေ့ ၁ လုံး၊ ဖြစ်ခဲ့တာ ကြာကြာသလို သောက်ရမယ်။ ၆ ပါတ်။ လက်သည်း-ခြေသည်းမှို၊ ပြန်ပြန်ဖြစ်နေသူတွေကို တပါတ်တခါ ပေးတယ်။
b. Fluconazole 150-300-400 mg ကို ၂ ပါတ်ခြားပြီး ၂ ခါ။ Yeast (Candida) မှိုဆေး၊ Tinea Versicolor (Pityriasis Versicolor) ညှင်း၊
c. အာခေါင်မှို၊ အစာမြိုပြွန်မှို၊ ဦးနှောက်မြှေးမှို၊ Children PO / IV6to 12 mg/kg/day; 0.1–0.2 g daily; Fluconazole (Diflucan IV) 0.2–0.4 g
d. C. meningitis မှိုကြောင့် ဦးနှောက်မြှေးရောင်ခြင်း၊ 12 mg/kg on first day, followed by6mg/kg/day; Adults PO / IV 400 mg first day, followed by 200-400 mg every day x 10 to 12 wk;
e. မှိုကြောင့် အစာမြိုပြွန် ရောင်ခြင်း၊ Adults PO / IV 200 mg first day, followed by 100 mg every day thereafter for minimum of2wk; Children PO / IV6mg/kg on first day, followed by3mg/kg every day thereafter for minimum of2wk
f. မှိုကြောင့် ဆီးလမ်း-ဝမ်းတွင်းရောင်ခြင်း၊ Adults Daily doses of 50 to 200 mg;
g. Vaginal Candidiasis မွေးလမ်းကြောင်းမှို၊ Adults PO 150 mg single dose;
h. ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး ခေါင်းကိုက်၊ မူး၊ ဝမ်းပျက်၊ ယား၊ အစာမကျေ၊ အစားပျက်။
231. Flucytosine = Candida, Cryptococcus, Aspergillus, and other fungi မှိုရောဂါဆေး၊ Dosages of 3–8 g daily (75–150 mg/kg/d) တခြားဆေးနှင့်တွဲပေးသည်။
232. Fluocinolone, Triamcinolone, Mometasone Cream 0.125% BD အရေပြားနာ၊ နှင်းကူနာ၊ Fluocinonide ointment 0.05% (အက်ဖ်သပ်စ်-အာလ်ဆာ) Aphthous ulcer ပါးစပ်နာ၊
233. Fluoride သွားပုတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ဖလိုရိုက်ဓါတ်ဆား၊ 0.05 mg/kg daily
234. Fluoroquinolone (Levofloacin) 500 mg OD နူမိုးနီးယား၊ Pneumonia
235. Fluoxetine (HCl) 20-80 mg Daily စိတ်ကျရောဂါဆေး၊ (Prozac) 5-40 mg (max 80 mg)
236. Fluphenazine (Stemetil) စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည့်ဆေး၊ Fluvoxamine (Luvox) 100-300 mg (max 300 mg) စိတ်ကျရောဂါ၊ Depression and Mania
237. Folic Acid = Vitamin B9= 0.5-1.0 mg/daily Orally/IV/IM ဖေါလစ်အက်စစ် သွေးအားဆေး၊
238. Foscarnet (Foscavir) 180 mg/kg (induction) 90–120 mg/kg (maintenance) AIDS ရှိနေသူ acyclovir-resistant mucocutaneous herpes simplex virus (HSV) infections ရေယုံရောဂါဆေး၊
239. Fosfomycin ဆီးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ 1 gm TDS IM (1 gm TDS IM) (1-4 gm TDS IV) (500 mg QID Oral) (25 mg/kg QID Oral)
240. Fourderm 10 mg = Betamethasone (Valerate) စတီရွိုက်ပါသော နားထည့်ဆေး-စားဆေး၊ 0.1%4hourly Ear drop, 0.05-0.1%; 0.027 mg/kg BD Orally; 0.2 mg/kg TDS IV
241. Framycetin Sulphate = ပဋိဇီဝဆေး၊ အရေပြားနာ၊ ဆီးအိမ်နာ၊ အစာလမ်းကြောင်းနာ၊ မီးလောင်နာ၊ နား-နှာခေါင်း-လည်ချောင်းနာ၊ မျက်စိနာ၊ ခွဲစိတ်နာ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ၊
242. Fruitobin ပရိုတင်း-သံဓါတ်-ဗီတာမင်-ဓါတ်ဆားများ ပါသည့်ဆေး၊
243. Fungicip (Clotrimazole), မွေးလမ်းကြောင်းမှိုဝင်ခြင်း၊ Vaginal suppositories 100 mg x6nights and 200 mg x3nights; Fungicip-100-200 Tablets, Cream, 1% w/w 2% w/w vaginal gel
244. Furazolidone လူကြီး 100 mg QID x 7-10 days; ကလေး = (¼ to ½ tablet) QID; Furazole-M (Furazolidone 100mg + Metronidazole 300 mg) (ဂိုင်ယာဒီးယား) ပိုးဝင်၍ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ (ဗက်ဆလရီ) ဝမ်းကိုက်၊ ခရီးသွား ဝမ်းပျက်ခြင်း-ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ ဗိုက်နာ၊ မူးဝေ၊ ဆီးနီ၊ ခေါင်းကိုက်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ အတက်ရောဂါ ရှိသူများ မပေးသင့်၊
245. Furosemide or Frusemide (Lasix) = ဆီးသွားစေသည့်ဆေး၊ ကိုယ်ရောင်၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ (20 mg BD and 40-320 mg in 2-3 doses) ; 40 mg OD followed by 20 mg OD; အရေးပေါ်သွေးတိုးကျရန် = 10-80 mg IV ရုတ်တရက် အဆုပ်ရောင်ခြင်း၊ Acute pulmonary edema IV ½ or 1 ampoule stat ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ ရေ-ဆားနည်း၊ အစာအိမ်အောင့်၊ အစားပျက်၊ အားယုတ်၊ ကြွက်သားနာ၊ ကျောက်ကပ်၊ အသဲမကောင်းသူ၊ (ဂေါတ်) ရှိသူ၊ (လူးပတ်စ်) ရောဂါရှိသူ၊ ဆီးချိုးရှိသူတို့အား မပေးရ၊
PRN = SOS = လိုအပ်တဲ့အခါ